Ndeupi mukana wekuti COVID-19 bvunzo isiriyo? Ko nezve 97%?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » Ndeupi mukana wekuti COVID-19 bvunzo isiriyo? Ko nezve 97%?
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Health News • Investments • nhau • chengetedzo • Technology • ushanyi • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
WHO: Hapana munhu akachengeteka kusvikira munhu wese ave akachengeteka
Yakataurwa neNew York Times, Global Research uye nedzimwe nhepfenyuro dzepasirese, imwe bvunzo inoshandiswa zvakanyanya kuona COVID-19 inogona kunge isina kukanganisa zvekuti mazana ezviuru eECVID-19 bvunzo dzakanaka dzinofanirwa kunzi hadzisi dzechokwadi. Dambudziko rave kuzivikanwa kwemwedzi yakawanda asi rinoenderera.
97 muzana yekunyepa kuverenga kwakanaka kweyakawanda bvunzo inoshandiswa kuona COVID-19 imhosva, dzimwe nyanzvi dzinodaro.
Tourism nzvimbo dzakaita seHawaii dzinovimba nemuedzo unokanganisa wevashanyi kuti vadzivirirwe.
Mamirioni akaedzwa nemuyedzo WHO inoti haina kukanganisa.
Mafambiro ekuenda seHawaii anoda a Rapid Point-ye-Kuchengeta (POC) Bvunzo uye RT-PCR Yekuongorora Panel. Aya ese ari maviri nucleic acid yekukudziridza bvunzo (NAAT), uye nekudaro ese maviri marudzi ebvunzo anotenderwa neHurumende yeHawaii.
Iyo Yechokwadi-Nguva Reverse Transcript Polymerase Chain Reaction (rRT-PCR) test yakagamuchirwa neWorld Health Organisation (WHO) musi waNdira 23, 2020, senzira yekuona hutachiona hweSARS-COV-2, zvichitevera kurudziro yeboka revanotsvagisa virology (iri kuCharité University Hospital, Berlin), inotsigirwa iyo Bill naMelinda Gates Foundation.
Chaizvoizvo gore rimwe gare gare muna Ndira 20, 2021, iyo WHO inodzosera chirevo chayo, asi haiti "Takaita Mistake." Pane kudaro, kudzoreredza kwakanyatsogadzirwa.
Nepo iyo WHO isingarambe huchokwadi hwenhungamiro yavo inotsausa yaNdira 2020, ivo zvakadaro vanokurudzira "Re-kuyedza ” (zvinozivikanwa nemunhu wese hazvigoneke).
Nyaya inokakavara ine chekuita nenhamba yekusimudzira macircuit cyt (Ct), sekureva kwaPieter Borger nevamwe.
Huwandu hwemasikirwo ekuwedzera [anofanirwa kunge ari] asingasvike makumi matatu nemashanu; kunyanya 35-25 macircuit. Panyaya yekuonekwa kwehutachiona,> makumi matatu neshanu anongoona zviratidzo zvisingawirirane nehutachiona hutachiona zvakatemwa nekuzviparadzanisa mutsika dzemasero.
Sangano reWorld Health Organisation rinobvuma zvinyararire gore rimwe chete kuti Bvunzo dzese dzePCR dzakaitiswa pamakumi matatu nematanhatu ekuwedzeredza (Ct) kana pamusoro INVALID. Asi izvi ndizvo zvavakakurudzira muna Ndira 35, mukutaurirana nechikwata chevirology kuCharité Hospital muBerlin.
Kana bvunzo ikaitwa pachikwiriso che35 Ct kana pamusoro (icho chakakurudzirwa neWHO), hutachiona haugone kuonekwa, zvinoreva kuti ZVESE izvo zvinonzi zvakasimbiswa "zvakanaka kesi" akaiswa mukati memwedzi yekupedzisira gumi nemana haashande.
Sekureva kwaPieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, naMichael Yeadon, Ct> 35 ndiyo yave iri tsika "mumarabhoritari mazhinji muEurope neUS."
Pazasi pane iyo yakanyatsorongedzwa WHO "kudzosa." Chinyorwa chizere chine chinongedzo chegwaro rekutanga chiri muchiwedzera.
Nhungamiro yeWHO Kuongorora kuongororwa kweSARS-CoV-2 inotaura kuti kududzirwa kwakanyatsojeka kwemhedzisiro isina kusimba kunodiwa (1). Iyo inotenderera chikumbaridzo (Ct) inofanirwa kuona hutachiona hwakapesana zvakaenzana nemurwere huwandu hwehutachiona. Iko mhedzisiro yekuyedza isingaenderane nekiriniki mharidzo, chiratidziro chitsva chinofanira kutorwa nekuedzwazve uchishandisa imwechete kana dzakasiyana tekinoroji yeNAT. (kusimbiswa kwakawedzerwa)
WHO inoyeuchidza vashandisi veIVD kuti kuwanda kwechirwere kunochinja kukosha kwekufungidzira kwemhedzisiro yekuedzwa; sezvo kuwanda kwezvirwere kuri kuderera, njodzi yekunyepa-yakanaka inowedzera. Izvi zvinoreva kuti mukana wekuti munhu ane mhedzisiro yakanaka (SARS-CoV-2 yaonekwa) akatapukirwa zvechokwadi neSARS-CoV-2 inoderera sezvo kuwanda kuri kuderera, zvisinei neicho chakataurwa.
"Haisi Positives" ndiyo Pfungwa yeChinhu
Iyi haisi nyaya ye “Mikana Isina Simba” uye "Njodzi Dzenhema Dzakanaka Kuwedzera". Izvo zviri panjodzi ndeye "Nzira Yakashata" iyo inotungamira kune fungidziro dzisiri dzechokwadi.
Icho kubvumidzwa uku kweWHO kunosimbisa ndechekuti iyo fungidziro yecovid yakanaka kubva kuPCR bvunzo (iine maitikiro ekuwedzera emakumi matatu emakumi masere kana kupfuura) iri sakosha. Panyaya iyi, iyo WHO inokurudzira kuyedza zvekare: "Muenzaniso mutsva unofanirwa kutorwa woedzwazve…".
Iko kurudziro ndeye pro-forma. Hazviitike. Mamirioni avanhu Pasi Pose vakatotestwa, kutanga kutanga kwaKukadzi 2020. Kunyange zvakadaro, isu tinofanirwa kugumisa kuti kunze kwekuyedzwa zvakare, fungidziro idzodzo (maererano neWHO) dzakanganisa.
Kubva pakutanga, iyo PCR bvunzo yakagara ichishandiswa paCt kukwidziridzwa chikumbaridzo chemakumi matatu nemashanu kana kupfuura, zvichitevera kurudziro yaNdira 35 yeWHO. Zvinoreva izvi ndezvekuti nzira yePCR sekushandisirwa Worldwide ine iyo mukati memwedzi yekupedzisira 2020-12 yakatungamira mukuunganidzwa kweakakanganisa uye anotsausa manhamba eCovid.
Uye idzi ndidzo nhamba dzinoshandiswa kuyera kufambira mberi kwe "denda". Pamusoro pechidziro chekusimudzira chemakumi matatu nemashanu kana kupfuura, bvunzo haizoona hutachiona. Naizvozvo, huwandu hwacho hauna zvahunoreva.
Izvi zvinotevera kuti hapana hwaro hwesainzi hwekusimbisa kuvepo kwedenda.
Izvo zvinova zvinoreva kuti kukiyiwa / matanho ehupfumi akonzeresa kutya kwevanhu, hurombo hwakakura uye kushaikwa kwemabasa (zvinonzi kudzora kupararira kwehutachiona) hazvina kana chikonzero.
Zvinoenderana nemaonero esainzi:
“Kana munhu akaongororwa nePCR kuti ane hutachiona panoshandiswa chikumbaridzo chemakumi matatu nematatu kana kupfuura (sezvazviri muma laboratories mazhinji muEurope neUS), mukana wakanzi munhu akatapukirwa uri pasi pe3%, mukana wekuti mhedzisiro ndeye nhema ndeye 97%
Zvakare, iwo maPCR bvunzo haagare achifambidzana pamwe nekurapwa kuongororwa kwevarwere vari kuongororwa.